Tadidinao Ve?—Desambra 2016
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Desambra 2016
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mingrelian Mongol Mooré Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Fahotana hoatran’ny ahoana no tian’i Jesosy horesahina ao amin’ny Matio 18:15-17?
Fahadisoana lehibe ilay izy matoa mahavoaroaka, raha tsy voalamina. Mety ho fisolokiana ilay izy, na fanendrikendrehana. Ny olona tafiditra amin’ilay izy ihany anefa dia efa afaka mandamina an’ilay izy.​—w16.05, p. 7.
Inona no azonao atao mba handray soa kokoa ianao rehefa mamaky Baiboly?
Eritrereto hoe tsy maintsy hisy lesona hotsoahanao foana amin’ilay izy, ka tadiavo izay hevitra azonao ampiharina. Mametraha fanontaniana, ohatra hoe: ‘Ahoana no azoko ampiasana azy ity mba hanampiana ny hafa?’ Manaova fikarohana amin’izay fitaovana anananao.​—w16.05, p. 24-26.
Mino ny Kristianina fa mbola hatsangana ny maty. Diso àry ve izy raha malahelo be rehefa misy havany nodimandry?
Tsy hoe satria mino ny fitsanganana amin’ny maty ny Kristianina, dia tsy malahelo intsony. Nalahelo be, ohatra, i Abrahama rehefa maty i Saraha. (Gen. 23:2) Tsy halahelo be intsony anefa ny olona nidonam-pahoriana rehefa mandeha ny fotoana.​—wp16.3, p. 4.
Iza ilay lehilahy mitondra fitoeran-dranomainty sy ireo lehilahy enina mitondra fitaovam-piadiana, resahin’ny fahitan’i Ezekiela?
Tafika any an-danitra izy ireo. Nandray anjara tamin’ny fandravana an’i Jerosalema izy ireo, ary handray anjara amin’ny fandravana ny tontolon’i Satana amin’ny Hara-magedona. I Jesosy Kristy ilay lehilahy mitondra fitoeran-dranomainty, amin’ny andro ankehitriny. Izy no hanisy marika an’ireo olona ho tafavoaka velona.​—w16.06, p. 16-17.
Nahoana ny Baiboly no saika tsy nisy intsony?
1) Mora simba ny fitaovana nanoratana azy, anisan’izany ny taratasy papyrus sy ny hodi-biby. 2) Nisy mpitondra fanjakana sy mpitondra fivavahana nitady hamongotra azy io. 3) Nisy nitady hanova ny tao anatiny.​—wp16.4, p. 4-7.
Ahoana no hatao raha te hanana fiainana tsotra?
Fantaro izay tena ilainao. Aza mandany vola amin’ny zavatra tsy ilaina. Manaova teti-bola ka ataovy lisitra izay zavatra tsy maintsy ilana vola. Amidio na omeo olona na ario izay zavatra tsy ampiasainao intsony. Aloavy daholo ny trosanao. Ahenao ny fotoana iasana. Eritrereto izay azonao atao mba hanompoana bebe kokoa.​—w16.07, p. 10.
Inona no lazain’ny Baiboly hoe sarobidy noho ny volamena sy ny volafotsy?
Milaza ny Joba 28:12, 15 hoe tsara noho ny volamena sy ny volafotsy ny fahendrena avy amin’Andriamanitra. Miezaha àry hahazo azy io, nefa miezaha koa hanetry tena sy hanana finoana matanjaka foana.​—w16.08, p. 18-19.
Mahazo manao volombava ve ny rahalahy?
Tsy mampaninona ny olona any amin’ny toerana sasany ny mahita olona manao volombava voahety tsara. Mety tsy hisakana azy ireo tsy hihaino ny vaovao tsara izany. Aleon’ny rahalahy sasany any anefa tsy manao volombava. (1 Kor. 8:9) Hafahafa kosa any amin’ny toerana sasany ny mahita Kristianina misy volombava.​—w16.09, p. 21.
Nahoana isika no afaka mino fa tena nisy ny adin’i Davida sy Goliata?
Nanan-tombo 20 santimetatra teo ho eo monja ny halavan’i Goliata, raha oharina amin’ny lehilahy lava indrindra eran-tany tamin’ny taonjato faha-20. Tena nisy koa i Davida. Manaporofo an’izany ny soratra tranainy iray miresaka momba ny taranany, ary ny tenin’i Jesosy. Tena misy daholo koa ireo toerana voaresaka ao amin’ilay tantara.​—wp16.5, p. 13.
Inona no tsy itovizan’ny fahalalana sy ny fahiratan-tsaina ary ny fahendrena?
Mahalala zavatra ny olona manana fahalalana. Ny olona manana fahiratan-tsaina indray mahatakatra hoe inona no ifandraisan’ny zavatra fantany. Ny olona manana fahendrena kosa mahay mampiasa ny fahalalana sy ny fahiratan-tsaina mba hanaovana zavatra tsara.​—w16.10, p. 18.
TANTARAM-PIAINANA ‘Tonga Zava-drehetra Amin’ny Karazan’olona Rehetra’
Tena Tsara Fanahy i Jehovah ka Nanafaka Antsika
Hahazo “Fiainana sy Fiadanana” Izay ‘Mampifantoka ny Sainy Amin’ny Fanahy’
Apetraho Amin’i Jehovah Daholo Izay Mampanahy Anao
Mamaly Soa An’izay Mitady Mafy Azy i Jehovah
Tena Hendry ny Olona Malemy Fanahy
Fanondroana ny Foto-kevitra Tamin’ny Tilikambo Fiambenana 2016
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Desambra 2016
Raki-peo Fandikana raki-peo NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Desambra 2016
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Desambra 2016
Tadidinao Ve?—Desambra 2015